Inona no atao hoe OOH? | Martech Zone fanafohezan-teny
Martech Zone » fanafohezan-teny » Fanafohezana manomboka amin'ny O	» OOH
OOH no fanafohezana ny ivelan-trano.
Ny dokam-barotra ivelan-trano, antsoina koa hoe doka nomerika ivelan'ny trano (DOOH), dokam-barotra ivelan'ny trano, haino aman-jery ivelany, ary haino aman-jery ivelan'ny trano, dia dokam-barotra efa za-draharaha amin'ny fitaovana tsy ao an-trano. Ny doka OOH dia ahitana takela-by, doka fampirantiana, ary afisy hita rehefa mivoaka ny tranony ny olona iray ary manao hetsika mifandraika amin'ny dokambarotra. Misy ihany koa ny tsena vaovao, Audio Out-Of-Home (AOOH).